Fanjakana mahantra, vahoaka mpangataka !
Matoan-dahatsoratra Lasa ve ny zavatra taloha ? P.Prospère il y a 5 jours Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 26 jolay izao, laharana 4191
Fotoana inona izao iainantsika izao ?
Lasa ve ny zavatra taloha ?
﻿ Ireo mampanalavitra antsika amin’ny fampandrosoana !
P Prospère il y a 5 mois
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 05 jolay izao, laharana 4188
Fahaleovan-tena faha-60 !
Haratsiam-panahy amin’ny politika !